လိပ်စာ:6ကြမ်းပြင်, Leishi စက်မှုဇုံ, No.1119 Guanlan Guanguang လမ်း, Longhua အသစ်ကခရိုင်, ရှန်ကျန်း, တရုတ်
ဖုန်းနံပါတ်: 0086 0755-23773942
ဖက်စ်: 0086 0755-23773942
E-mail ကို: info@phenloxy.com
Skype ကို: Hawk ရဟတ်ယာဉ်
Skype ကို: Allen က
ကြောင့် "တရုတ်နှစ်သစ်ကူး" လာမယ့်တာဖြစ်ပါတယ်, ငါတို့ကုမ္ပဏီအားလပ်ရက်စဉ်အတွင်း 4th မတ်လ, 2018. မှ 10th ဖေဖော်ဝါရီလ, 2018 ကနေရှည်လျားသောအားလပ်ရက်ယူမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုကိုရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်အရောင်းဌာနအွန်လိုင်းနေတုန်းပဲဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့အသစ်သောအမိန့်ကိုလက်မခံနိုင်ပြီးကျနော်တို့ကြိမ်မြောက်ပြီးစီးခြင်းလာသောအခါသူတို့ကိုစီစဉ်ပါလိမ့်မယ် ... ဆက်ဖတ်ရန် »
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်လက်ပတ်နာရီတီးဝိုင်းများသောအားဖြင့်မိကျောင်းသားရေ, ငါးမန်းသားရေ, ပုတ်သင်ညိုတစ်ကောင်သားရေ, ငှက်ကုလားအုတ်သားရေသို့မဟုတ် cowhide ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အချိန်အားဖြင့်ဝင်အဖြစ်နေပါစေသင်ရှိသည်သားရေများရာမျိုး, တပ်သားခိုင်မာစေရတဲ့လိမ့်မည်။ သင်တို့မူကား, တပ်သားများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုရန်၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုဘဝက c ပိုပြီးအာရုံစိုက်ပါလျှင် ... ဆက်ဖတ်ရန် »
အချိန် post: နိုဝင်ဘာ-18-2017
လက်ပတ်နာရီ၏ရေစိုခံစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပတ်သက်. နိုင်ငံတကာစံနှုန်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြဌာန်းချက်ရှိပါတယ်: ရေစိုခံပြသသောလက်ပတ်နာရီ, အနိမ့်ဆုံးစံ 20 မီတာရေအတိမ်အနက်အတွက်ရေဖြည့်ဖို့မစောင့်ရကြမည်ဖြစ်ပါတယ်။ အသက် 30 မီတာရေစိုခံနည်းလမ်းများနာရီကို 30 မီတာရေကလဝကအတွက်ရေဖြည့်ဖို့မစောင့်ရှောက်သင့်ပါတယ် ... ဆက်ဖတ်ရန် »
Post ကိုအချိန်: Sep-10-2017
As the factory’s scale is enlarging, Phenloxy Watch Co., Ltd relocated from the former location, ROOM 715 Shangmei Times Building, 4th Floor, No.38, Huimin 1st Road, Guanlan Town, Longhua District, Shenzhen on 15th, Sep, 2017. 1500 square meter, over one hundred employees, our scale is enla...ဆက်ဖတ်ရန် »